राष्ट्रवादी कामरेड ! - Ekarmachari
२७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १३:३९
कामरेडका किवदन्ती नै धेरै । उहाँ सोह्र वर्षको उमेरमै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा होमिनु भएको रे । अनि २५÷२६ बर्षको हुँदा त आन्दोलनकै अगुवा, सशक्त र सक्रिय क्रान्तिकारी रे । कतिसम्म भन्न भ्याए भने सानैमा सुतेको वेला नागराज आएर उहाँको निधारमा बसेका रे, त्यसैले उहाँ राजयोगमा परेको रे । उहाँमा राजयोग नै भएर त राज गर्नुभएको होला !
उहाँमा असीम चमत्कारी गुण छन् । अनि उट्पट्याङ्गट त कति कति । जे सुर चले त्यही गरिदिने कसैलाई वजाइदिने कसैलाई ठटाइदिने अनि कसैको हत्या समेत गर्न पछि नपर्ने ।
यस्तै उट्पट्याङ्ग गर्दै गर्दा सरकारले अपराधी ठानेर लुक्नको हैरान । एक जना होचो कदका कामरेडले लुकाएर आफ्नो क्षेत्र त पठाएका थिए नि चुप लागेर बसे पो त्यहाँ नि उट्पटयाङ्ग गर्दा गर्दै पञ्चायत सरकारले समातेर हाल्दियो खोरमा । त्यो पनि वाहिर बस्दा के हो के हो, भित्र बसियो भने ढुक्क भनि मिलेमतो मै छिरेका रे । अझ कोही कोही त कैदीकै जासुस बन्न भित्र छिरेका भन्छन् उहाँको हर्कत पनि त्यस्तै थियो रे ।
तर सानोमै पढ्ने रहरका भएकाले उनले त्यो रहर चाहिँ मनग्गे पुग्ने गरि पुरा गरेछन पढ्नु पढेछन् ।
खासगरी हिटलर,पोलपोट र खुष्चेभ । मज्जाले के केलाई पढेछन् । अनि वाहिर निष्केपछि कसरी राज्य सत्तामा पुग्ने र चमत्कार गर्ने सोचेरै अनेक योजना र कल्पना बनाउदै बसेछन् ।
अरुले गरेको आन्दोलनको परिणाम उनी वाहिर आएछन् । वाहिर आउँदा त मान्छेहरु देखेरै तीन छक परेछन् । खाँटी कामरेडलाई छोडेर उनी धरै आँटी कामरेड भएर निस्केछन् । जेल नेल बसेर आएका भनेर अरु कामरेड साथीहरुले राम्रै भूमिका साथ स्वागत गरे । उनमा सन्तोष हुने कुरै थिएन सँगैका कामरेड ठूल्ठूला पदमा आफूचाहिँ फुच्चे जस्तो ठान्न थाल्नु भएको उहाँँले त झन उग्र कुरा गर्न थाल्नु भएछ ।
बाहिरका बवुरा कामरेडलाई के थाहा ? उहाँमा असीम राजयोग छ भन्ने कुरा, पछि कामरेडको सत्ता आँउदा शक्तिशाली मन्त्री पद नै दिएपछि भने बल्ल उहाँको दिमागले काम गर्न थालेको अनुमान गर्छन । हुँदै नभएको युवा दस्ता बनाउने भन्दै त्यसको नेतृत्व पार्टीका तर्फबाट लिएर युवा परिचालन गर्दै उनीहरुको सुरक्षा गर्न थाले । युवा त के भन्ने त्यतिबेला ठाउँ ठाउँका गुण्डहरु समेट्ने संगठन बनाए । राजनैतिक आड पाएपछि युवाहरुको चुरीफुरी बेग्लै भइगयो । छिटै यो संगठन सशक्त सक्रिय बन्न थाल्यो र यसैका बलमा कामरेड पनि पार्टीभित्र दबाब जमाउने भए । यसलाई क्यास गर्दै भित्र भित्र आफ्नो समूह बनाई सशक्त हुन थाले । समय वित्दै जाँदा तिनै युवा अव पार्टी भित्र छिराई समर्थक बढाउन थाले शुरुमा नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने भरोसा दिलाए । विस्तारै विद्रोह, फुट ल्याउने । कहिले कसलाई समर्थन गर्ने त कहिले कसलाई समर्थन गर्ने रणनीतिमा अख्तियार गरे । यद्यपि आफूनै केन्द्रमा पर्ने रणनीति ।
अनेक तिकडम र साँठ गाउँ गर्दा गर्दै उनी नै पार्टीको प्रमुख बन्न सफल भए । त्यसपछि त सारा छिमेकी देशहरु, पार्टी समेत चनाखो हुन थाले यसपछि शुरु भो उहाँलाई स्थापित गरेर आफ्नो दुनो सोझयाउने कुटनीति । उहाँलाई चमत्कारी बन्नु थियो अरुलाई स्वार्थ पुरा गर्नु थियो । मत मिलेपछि मधेसवादी दलका प्रभावशाली देखिएका नेताहरु मार्फत संविधान अनुकुल भएन भन्ने अनि जेनतेन सरकारमा ल्याउने भारत विरोधि बक्तव्य बाजी व्यवहार प्रदर्शन गर्ने अनि खाँटी राष्ट्रवादी देखिएर समस्या समाधान गर्ने र उनी मात्रै असली राजनेता बनाउने डिजाइनामा काम भयो र सफल पनि भो ।
त्यसपछि शुरु भो प्लान बि, जसमा असली राष्ट्रवादीहरुलाई पाखा लाउने काम । फकाएर कम्युनिष्ट एकतामा अर्काे विद्रोही नेतालाई भागवण्डाको राजनीतिबाट आफ्नो बसमा पारेपछि दुइतिहाइ मत नै पोल्टामा प¥यो अनि त उहाँकै देबत्वरण गरी भ्रमपुर्ण सहमती गर्दै फेरि सरकार प्रमुख बनाइयो । त्यस पछि महत्वपूर्ण पदमा सवै आफ्ना आसेपासे ।
त्यसपछि त जे गरेपनि सफल हुने आत्म विश्वास । अगाडिका सारा बाचा वन्धन तोडियो । बिधि विद्यान मिचियो । शारणमा जानेलाई उपहार प्रदान गरियो । नजानेलाई अनेक उपायद्वारा फालियो । जब सरकारमा संकट आउन थाल्यो तव राष्ट्रवादी धार उदाङ्गिदै आउन थाल्यो अब बिरोधीहरुलाई तहलगाउने अनेक वक्तव्य बाजी, जे पनि गर्ने रणनीति शुरु भो । मधेसवादीसँग को साँठगाँठ उपयोगवादको राजनीतिबाटै शुरु भएको थियो तर धेरै मधेशबादीहरु आफ्नै देशका विरुद्ध जान नमानेपछि पार्टी फोड्ने रणनीति आख्तियार भयो आफ्नै पार्टी मिलाउन नसक्नु भएका उहाँँले अरु समुहसँग मिलेर जो पूर्व योजना थियो त्यो कार्यान्वयन गर्न थालियो ।
त्यसपछि शुरु भयो संविधान सिध्याउने र अध्यादेशबाट राज गर्ने अनि अंक गणित हेर्ने विगार्ने, खेलको नियम नै परिवर्तन गर्ने, संविधानको समेत गलत व्याख्या गर्ने त्यसैलाई मूर्ती सरहका उच्चहरुले समर्थन गरिदिने अनि राज्य कब्जा रणनीति शुरु भो । बिस्तारै आफूले गर्न खोजेका काम गर्दै जाने प्लान सी शुरु भैसकेको छ । सोही अनुसार एक समयमा कट्टर दुश्मन देखाई नेपाली जन बेवकुफ बनाएको खुसीमा खुसी साट्ने हिजो सिमामा वसेर ढुंगा हान्ने संविधान जलाउनेहरु सबै माग पूरा भयो भनी सरकार चलाउने ।
जय होस ती मधेसका मसिहा अनि राष्ट्रवादी कामरेडको ।
खेल तो अव शुरु हुआ है !
(इकर्मचारी डटकमका नियमित स्तम्भकार (व्यंग्य लेखक) पोखरेली कान्छोको व्यग्यं सग्रह हाफ जिन्दगी छिट्टै बजारमा आउँदैछ ।)
प्रकाशित मिति : २७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १३:३९ June 10, 2021 २७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १३:३९